ငရမန်ကန်း (သို့) ရာမန်ခန်း အငြင်းပွားမှု့ကို စမ်းစစ်လေ့လာခြင်း | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
This entry was posted on January 10, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, မှတ်စုမှတ်ရာများ, အထူးကဏ္ဍ, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← RFA Burmese – “ပြည်ပအထွက် အဖမ်းခံရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာများ လဝက ဥပဒေနဲ့ အရေးယူခံရမည်”
“၂၀၁၅ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကျရင် အန်အယ်ဒီနိုင်မှာပဲ၊ ဒါပေမယ့် အစိုးရဖွဲ့နိုင် မဖွဲ့နိုင်တော့ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ဘူး” →